Gbasara Anyị - Shenzhen Polymer Batrị CO., LTD
Shenzhen Polymer Batrị CO., LTD
Dịka onye nrụpụta ọkachamara enwere ihe dị injinia 30 na PLM R&D otu gụnyere 5 PHD, 10 MFD na Bachelor 15. Ihe dị ka nkeji iri abụọ Akpaaka na-emepụta ngwa ahịa, ihe nbipụta 25 nke ngwa abụọ na obere mmepụta mmepụta 8.
Na PLM, anyị nyefere onwe anyị ịnye ndị ahịa ngwaahịa dị elu. Na-arụ ọrụ ọrụ ma na-enye afọ ojuju mgbe ọrịre ọrịre, a ga-aza mkpesa ọ bụla.
n'ime awa 24 wee depụta usoro dị n'okpuru: azụ-ịgba ọsọ, nyocha, nchịkọta na mkpesa mkpesa 8D, na-eme ka mma anyị ka mma iji zute ọkwa ndị ahịa.
Shenzhen Polymer Batrị CO., LTD ka atọrọ na 2014, bụ ọkachamara na-eduzi ndị na-emepụta batrị lithium ion nwere ihe karịrị 5years akụkọ ihe mere eme na China. Ngwaahịa kachasị bụ batrị polima, enwere ike ịgbanye batrị 18650, batrị e-igwe kwụ otu ebe, batrị lithium ma ọ bụ oru batrị ọ bụla ahaziri nke ọma. Anyị nwere ike ị nweta otu ụzọ nrịba na ngwaahịa niile sitere na batrị gaa na batrị dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Anyị bụ ọkachamara emeputa batrị lithium-ion. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ọ bụla, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na email na ala ma ọ bụ aka nri nke weebụsaịtị. Anyị ga-akpọtụrụ gị n'ime awa 24!